Cabdiqaadir Muumin oo uu Maraykanka ku Daray Liiska Argagixisada (VIDEO) - Hablaha Media Network
Cabdiqaadir Muumin oo uu Maraykanka ku Daray Liiska Argagixisada (VIDEO)
HMN:- Sirdoonkadalka Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda ayaa Cabdiqaadir Muumin oo ah hogaamiyaha Ururka Daacish ee dalka Soomaaliya ku dartay liiska argagixisada ee sida gaarka ah loo raadinayo.
Cabdiqaadir Muumin ayaa la sheegay in uu haatan madax ka yahay Daacishta dalka Soomaaliya ka jira, waxayna Saldhigyo ka sameysteen meelo ka mid ah buuraha deegaanada Puntland, Soomaaliya.
Cabdiqaadir Muumin ayaa loo adeegsaday xeer madaxweyne ee nambarkiisu yahay 13224, kaasi oo cunaqabateyn ku soo roga shaqsiyaadka iyo kooxaha la aaminsan yahay inay halis ku yihiin amniga dalka Mareykanka.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALAKA
Mareykanka ayaa faray dhammaan shaqsiyaadka iyo hay’adaha Mareykanka inaysan wax xiriir ah la sameyn karin Cabdulqaadir Muumin uuna yahay maanta laga bilaabo nin la baadi goobayo geeri iyo nolol.
Bishii October ee sanadkii 2015-ka ayey ahayd markii Cabdiqaadir Muumin iyo koox uu hogaaminayo ay ku dhawaaqeen inay isaga baxeen ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ku biireen ururka la magac baxay dowladda islaaamiga ah ee Daacish.